Efa nipetrapetraka daholo ny tranoheva, ny pilipitra, ny karipetra mena, ny “ruban” hotapahana. Efa voapetaka hatramin’ny takelaka “marbre” mirakitra ny anaran'ny filoham-pirenena sy ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena mariky ny fitokanana.
Tsy nipoitra anefa ny nandrasana na efa sasa-niandry tapak’andro teo aza ny rehetra, fa hoe : tsy manaiky hitokana ny asa satria tsy misy fanaka ny trano.
Serasera tsy niampita sa tsy nifanaraka ny fiadidiana ny Repoblika sy ny Zandarimariam-pirenena ?
Ny heno avy atsy andaniny mantsy dia hoe : mifindra trano ao tanteraka, miaraka amin’ny entany izay zandary hipetraka amin’ny trano vao namboarina ho azy ireo, ankilany anefa izany ny filoha mila trano misy fanaka ho atolotra, izay tsy tao anaty vinavina mialoha.